Sina: Ny haintany sy ny tohodranon’i Three Gorges · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2009 7:07 GMT
Nanomboka tamin'ny Septambra tamin'ity taona ity, ny tohodranon'i Three Gorges any Sina, ny tobin'herinaratra azo avy amin'ny rano lehibe indrindra eran-tany, dia nanomboka tetikasa famenoana mba hanatrarana ny fetran'ny tahiriny, 175 metatra. Tamin'ny Oktobra, nisy haintany mahery vaika tany amin'ny faritanin'i Hunan sy Jiangxi tamin'ireo faritra antonontonony sy iva miohatra amin'ny renirano Yangtze. Tamin'ny 25 Oktobra, nanambara ny ‘orinasa three Gorges’ any Sina fa tsy misy ifandraisany mihitsy ny haintany sy ny tetikasan'ny Three Gorges :
Zheng Shouren, Injeniera mpifehy ao amin'ny komity mitantana ireo Loharanon-dranon'ny renirano Yangtze, dia niteny fa ireo izay manilika ny andraikitra momba ny haintany any Hunan sy Jiangxi samirery amin'ny tetikasa Three Gorges dia mijery mitongilana. “Ny tena niteraka io haintany any Hunan sy Jiangxi io dia ny tsy fahampian'ny rotsak'orana any an-toerana ampian'ny fiakaran'ny maripàna tsy ankiato nanomboka tamin'ny Septambra,” hoy Zheng, izay mpikambana ao amin'ny Akademia Sinoa momba ny Injeniora.
Tamin'iny andro iny ihany, nasondrotra ny taham-pamatsian-drano mba hampalefaka ny haintany amin'ny faritra iva. Ny 28 Oktobra, nitatitra ny CCTV fa nisondrotra bebe kokoa ny famatsian-drano. Niaiky ireo tompon'andraikitra fa tsy ho tratra amin'ity taona ity ny tahiry mirefy 175 metatra nokendrena, nefa nanisika fa tsy misy fifandraisany amin'ny tetikasa Three Gorges mihitsy ny haintany.
Nandray anjara tamin'ny adihevitra i Qian Gang (钱钢), mpanao gazety sinoa fanta-daza. Tanaty lahatsoratra ho an'ny 1bao (壹报) tamin'ny 2 Novambra dia niteny izy fa:
Matetika ny haintany dia noho ny fiovaovan'ny toetr'andro. Faritany vitsivitsy, isan'izany Guangdong, dia nandalo haintany nandritra ity fahavaratra sy fararano ity. Nefa ny faritra midadasika tratran'ny haintany manodidina ny renirano Yangtze dia noho ny tetikasa Three Gorges. Araka ireo tatitra, niainga tamin'ny 148m ny hahavon'ny tahirin-dranon'ny Three Gorges ny 15 Septambra ka tonga 170m tamin'ny 24 Oktobra. Namorona renirano goavana sy tsy manam-paharoa vitan'olombelona izany.
Mandritra izay dia nihena haingana ny haavon'ny rano any amin'ireo loharano any amin'ny faritanin'i Hunan. Nahatratra ny ha-iva ambany indrindra tao anatin'ny 60 taona ny renirano Dongting . Voadona mafy tamin'izany ireo mpanjono sy ny fitaterana an-drenirano. Miatrika tsy fahampian-drano ireo tanàna toa an'i Changsha. Efa saika nahatratra ny ha-iva manan-tantara ireo renirano lehibe efatra any amin'ny faritanin'i Jiangxi. Ritra 40 andro mialoha noho ny mahazatra ny renirano Poyang.
Lasa nitsikera ireo tompon'andraikitra izy:
Manameloka ny toetr'andro ny komity mitantana ireo Loharanon-dranon'ny renirano Yangtze. Niteny ny komity fa mifototra amin'ny tanjona fisorohana ny haintany amin'ny taona ho avy ny tetikasa Three Gorges. Tsy misy afa-tsy ny fitahirizana rano be dia be no vahaolana hamatsiana rano mandritra ny vanim-potoana maina amin'ny herintaona.
Tsy fihetsika mpandray andraikitra izany. Toy ny mandroba olona ary avy eo manampy azy indray amin'ny fihantsaram-belatsihy. Azafady, aza mandainga amin'ireo olom-pirenena intsony. Mba hazavao azafady: raha fantatra fa ho vanim-potoanan'ny haintany ny fahavaratra sy fararano ho an'ny Sina afovoany, maninona no mbola manao tetikasa mety hitera-bokatra ratsy goavana ihany?
Fa maninona no nandray fanapahan-kevitra maimaika ny hanatratra ny hahavon'ny tahiry ho 175 metatra? Nanambara ireo tompon'andraikitra fa “handamina ny fifandajana ao amin'ny resaka fisorohana tondra-drano, famokarana herinaratra, fifamoivoizana an-drenirano ary ny famatsian-drano. Nefa nandiso izany fanambaràna izany ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny haintany tamin'ny volana lasa teo. Ny departemanta miandraikitra ny angovo, orinasam-panjakana goavam-be iray, dia tsy mitady afa-tsy zavatra iray ihany: vola.
Toa manako ao amina hevitra iray ao anatin'ny gazety mpivoaka isanandro ao Hong Kong izany:
Tena anton'ny fidinan'ny hahavon'ireo renirano Dongting sy Poyang ny fihenan'ny rotsak'orana. Nefa misy idiran'ny tetikasa Three Gorges koa izany. Nanomboka tamin'ilay fampihàrana ilay tetikasa hitahiry tamin'ny Septambra, nidina haingana be ny hahavon'ny Yangtze amin'ireo faritra iva. Dongting sy Poyang, izay niasa ho toy ny tahirin-drano miditra tany am-boalohany, dia lasa loharanon-drano ho an'i Yangtze.
Azo ampiasaina handrindràna ny fizotry ny rano ilay tetik'asa goavan'ny Three Gorges: ny fanakanana ny rano mandritra ny fotoan'ny orana ary famatsiana rano rehefa fotoan'ny haintany… Indrisy, tsy ho tanteraka izany sary lafatra izany, satria zara lasa antontan'entan'ireo mahita tombontsoa aminy ilay tetikasa.
[sary : www.1bao.org]